मिहिनेतले ३० वर्ष भन्दा अगाडी नै प्रगति गर्छन् यी राशि हुनेहरु ! – paradeskhabar.com
मिहिनेतले ३० वर्ष भन्दा अगाडी नै प्रगति गर्छन् यी राशि हुनेहरु !
August 20, 2021 345
आर्थिक रुपमा धनि बन्ने सबैको चाहना हुने गर्छ। कर्म गरेपछि फल राम्रो मिल्नेमा कुनै दुई मत रहेको छैन। तर सानो उमेरमानै कोहि धनि बन्न सक्छन् भने केहिले चाहिं धेरै कसरथ र कोसिस पछि मात्र धनि बन्न सक्ने गर्छन्।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार हरेक राशिको फरक व्यवहार साथै भाग्य हुने गर्छ। ३० वर्ष हुनु भन्दा अगाडीनै धनि हुने राशि निम्न उल्लेखित रहेका छन्।
यस राशी हुनेहरु आत्‍म सम्‍मान, आत्‍म‍ विश्‍वास र कठोर परिश्रमको कारण छिट्टै छानी बन्ने गर्छन्। आफ्नो हरेक निर्णय सोचेर लिने हुँदा पनि जीवनमा सफल हुने गर्छन् भने व्यवसायमा पनि अब्बल हुने गर्दा कन्या राशि हुनेहरु छिट्टैनै धनि हुन्छन्।
यस राशिका व्यक्तिहरु शान्त रहने गर्छन् भने आफ्नै तरिकाबाट काम पनि गर्ने गर्छन्। जुनै पनि हदसम्म को परिश्रम गर्ने हुँदा जीवनमा जहिले पनि सफल हुन्छन्। साथै आफ्नो आर्थिक खर्च नियन्त्रणमा राख्ने मात्र नभई उचित क्षेत्रमा लगानी गर्ने हुँदा पनि छिट्टै धनि हुने गर्छन् वृष राशि हुनेहरु।
यस राशि हुनेहरु धनको मामलामा छुट्टै मान्यता राख्ने गर्छन्। व्यवसायमा पनि नयाँ तरिका अपनाउने खुबी भएको हुँदा छिट्टै धनि बन्ने गर्छन्। साथै आफ्नो धनको सहि सदुपयोग गर्ने हुँदा पनि धनु राशि भएका व्यक्तिहरु छिटै धनि हुन्छन्।
Prevआज शनिबार काल भैरवको दर्शन गर्दै राशिफल हेर्नुहोस् ।
Nextआजको राशिफल २०७८ भाद्र ८ गते, मगंलबार
ग्राण्डीले घरघरमा पुगेर पिसिआर परी-क्षण गर्ने, स्वाँ’ब संकलनबापत् शुल्क ५ सय मात्र !